Codso kulliyadda? | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Sidee ayaan u codsadaa in ay college?
Codso kulliyadda qaadataa waqti badan iyo dadaal. Laakiin waxaa qiimo leh!
Shuruudaha gelitaanka kuliyadeed
Si looga aqbalo in laba ama afar sano, Waxaad u baahan doontaa shahaadada dugsiga sare. Haddii aadan dugsiga sare ma tagaan, ama uusan dhammayn kari waayay, waxaad ka heli kartaa isu diblooma. Tani waxay muujinaysaa in aad aqoon ku filan in ay galaan kulliyad.
Waxaad ka heli kartaa shahaadada dugsiga sare u dhiganta (loo yaqaan GED ama HISET) in kulliyadaha bulshada, iyada oo fasalo habeen ee soo galootiga iyo qaxootiga, ama in line la class GED free diyaarinta Refugee Center.
Waa maxay noocyada kulliyadaha ka jira?
Kuleejooyinka bulshada sida caadiga ah waa kulliyadaha labada sano in ay diiradda saaraan xirfadeed. Ardayda ka qalin jabiyaan jaamacadaha bulshada caadiga ah ay helaan shahaado ama digrii associate ah ee. Kuleejooyinka bulshada caawin kara ardayda ay helaan xirfado ay yihiin kuwo aad u muhiim ah si ay u bilaabaan shaqooyinka oo u oggolaan in ay ka helaan nolol (waxaa loola jeedaa in shaqooyin bixin ku filan oo ay ku nool yihiin oo aan haysan si ay leeyihiin laba shaqo ama caawinta bulshada). Kulliyadaha bulshada qaar waxay leeyihiin barnaamijyo lagu caawiyo ardayda si ay u gudbiyaan si kuliyadaha afar sanno ah. kulliyadaha bulshada guud waa qaali in ka yar afar sano ee kuliyad.
Dad badan oo Maraykan ay go'aansadaan in ay kulliyadda afar sanno ah u tagaan dib markii ay kaalinta sare. jaamacadda A waa machad ah oo bixiya ma aha oo kaliya degrees undergraduate, laakiin sidoo kale degrees graduate (Masters iyo Doctorates). colloquially, Americans tixraac hay'adaha sida "colleges".
Dadweynaha iyo kuwa gaarka
Jaamacadaha noqon kartaa dadweynaha ama kuwa gaarka ah. jaamacadaha gaarka ah sida caadiga ah waa ka qaalisan yihiin dadweynaha. Si kastaba ha ahaatee, Jaamacadaha gaarka loo leeyahay waxaa laga yaabaa in deeqo badan oo la heli karo.
shuruudaha codsiga jaamacadda
Haddii aad ogtahay oo college aad xiisaynayso, waxaad ka raadin kartaa bogga internetka ee ay warbixin ku saabsan sida loo codsado. Hoos waxaa ku qoran liis ay ku qoran yihiin shuruudaha ugu badan, edeb bestcolleges.com:
Qof kasta oo doonaya in la aqbalo in laba ama afar sano waa in ay buuxiyaan shuruudaha gelitaanka. Inkastoo kala duwan yahay jaamacad ka jaamacad, habka codsiga sida caadiga ah ku lug hoosaysiiyo:
foomka codsiga ee internetka ah
Warqad ujeeddo ama Bayaanka shakhsi ahaaneed
Ugu yaraan hal imtixaan dheeraad ah (inta badan ku xiran doorto hay'adda)
Laba ama in ka badan warqado ammaan ah in qoraal macalimiinta hore
Waxay natiijada baaritaanka caadiga ah
Waxaad ka heli kartaa nidaamka hage faahfaahsan oo tallaabo-tallaabo ah bogga internetka ee Adeegyada Language Jaamacadda. Codsashada jaamacadda tallaabo-tallaabo
Macluumaad dheeraad ah oo waxtar leh
Khayraadka Waxbarashada loogu talagalay dadka ajnabiga, qaxootiga, Magan gelyo iyo kale Americans New.
Resources ee ardayda ah ee jiilka kowaad